ခေါင်းဆောင်ရွေးပွဲကြီး (အပိုင်း-၁) (ဝတ္ထုတို) - News @ M-Media
ခေါင်းဆောင်ရွေးပွဲကြီး (အပိုင်း-၁) (ဝတ္ထုတို)
in ဝတ္ထုတို — November 5, 2013
နိုဝင်ဘာ- ၅ ၂၀၁၃
အခုတလော မောင်ကောင်းထိုက်တို့ ပုဂ္ဂလိက ကောလိပ်၏ ကျောင်းသား/သူများအချင်းချင်း ၊ ဆရာ/ဆရာမများအချင်းချင်း တွေ့ဆုံကြရာတွင် ကျောင်းကိစ္စ၊ သင်ခန်းစာ ကိစ္စများ သိပ်မဆွေးနွေး ဖြစ်ကြ။ ၎င်းတို့သည် အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသာ စိတ်ဝင်တစား ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြသည်။ အလားတူပင် မောင်ကောင်းထိုက်တို့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်လည်း နဂိုကတည်းကမှ စာသိပ်စိတ်မ၀င် စားသူများပီပီ ယခုလိုမျိုး ကောလိပ်တစ်ခုလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကျောင်းသင်ခန်းစာ မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းသားရေးရာပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေအသစ်တစ်ရပ်နှင့်တွေ့ဆုံနေသည့်အချိန်တွင်တော့ ပို၍ ပင် ကင်တင်းန် စကားဝိုင်းက မြိုင်ဆိုင်နေသည်။ ယင်း မောင်ကောင်းထိုက်တို့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် ဆိုသည်မှာကား… တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ပုဂ္ဂလိကကောလိပ် တစ်ခုတွင် ပညာ သင်ကြားနေကြသူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုကောလိပ်စာမွေးပွဲအောင်လျှင် နိုင်ငံခြားသို့ ပညာသင် သွားရန် ပြင်ဆင်နေကြသူများဖြစ်သည်။ မောင်ကောင်းထိုက်တို့ တစ်စုကတော့ ပညာလည်း တစ်ဖက်က သင်သလို ကွန်ပျူတာ နည်းပညာများကိုလည်း စိတ်ဝင်စားသည်။ နိုင်ငံရေးလည်း အလွတ်မပေး။ ဘောလုံးလည်း အကန်မပျက်ကြ။ အချုပ်အားဖြင့်တော့ ဟိုစပ်စပ်..ဒီစပ်စပ်နှင့် ပျော်ပျော်နေတတ် ကြသော ကောလိပ်ကျောင်းသားများပင်ဖြစ်ကြသည်။ ယခုလည်း ထုံးစံအတိုင်း ကင်န်တန်း တွင် တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ဖြင့် စကားစစ်ထိုးနေကြစဉ်..
“ဟိုင်း..နီလာ၊ နေကောင်းရဲ့လား”ဟူသော ချိုသာကြည်မြသော ပီယ၀ါစာ စကားသံလေးဖြင့် နှုတ်ခွန်းဆက်ကာ မောင်ကောင်းထိုက်တို့လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းထဲဝင်လာသူကား…
၎င်းတို့ကောလိပ်တစ်ခုလုံးတွင် ပညာတော်ကာ ရုပ်ချောသလောက် အခြေကြီးသူဟု သတင်းမွှေးသည့် ကြည်သာရီပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။ မောင်ကောင်းထိုက်တို့မှာ ဘာစကားမျှပင် မပြောနိုင်တော့လောက်အောင် ပါးစပ်များအဟောင်းသားဖြစ်သွားကြသည်။ ကြည်သာရီကပင် ဆက်လက်ပြီး ”တို့လည်း အတန်းအားလို့ library ဘက်သွားစာဖတ်မလို့၊ အဲဒါ you တို့ကိုတွေ့လို့ဝင် နှုတ်ဆက်တာ။ သွားလိုက်ဦးမယ်နော်..”ဟုဆိုကာ သိမ်မွေ့စွာပင် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။ မောင်ကောင်းထိုက်တို့နှင့် လက်ဖက်ရည်တစ်ဝိုင်းထဲထိုင်ကာစကားပြောနေသည့် နီလာကို ၀င်ရောက်နှုတ်ဆက်ရင်း ၀ိုင်းထဲရှိသကောင့်သားများအားလုံးကိုပါ အသိအမှတ်ပြုသည့် အပြုံးလေးဖြင့် အကြည့်တစ်ချက်ဝေ့၀ဲလိုက်သောအခါ ကောင်းထိုက်တို့လူစုမှာ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် ကြည့်ကာအတန်ကြာ မင်သက်နေမိကြသည်။ ထို့နောက်မှ… ၀င်းမောင်မှစတင်ပြီး ထိုမင်သက် နေသောလေထုကိုဖြိုခွဲလိုက်သည်။ “ဟဲ့..နီလာ၊ နင်နဲ့ သူနဲ့ဘယ်တုန်းကခင်တာလဲ၊ ငါတို့နဲ့လည်း မိတ်ဆက်ပေးဦးလေ..။”
“အေး..ငါကိုယ်တိုင်လည်း အံ့သြနေတယ်၊ ဒီအမျိုးသမီးက ငါနဲ့သိပ်မခင်ပါဘူး ၊ မေးပြော ခေါ်ထူးအဆင့်လောက်တော့ သိတာပေါ့ဟယ်၊ တစ်ကျောင်းတည်းသား မိန်းကလေးချင်းပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက အရင်တုန်းက မိန်းကလေးအချင်းချင်းတောင် ခပ်တင်းတင်းရယ်၊ အခုမှ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဖေါ်ရွေနေတာလဲမသိဘူး” နီလာလည်း နည်းနည်း စဉ်းစားရကျပ်သွားသည်။
”ငါထင်တာတော့..”ဆိုပြီး သူ၏လွယ်အိတ်ထဲမှ စာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ်ရာ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးဝိုင်းကြည့်လိုက်ကြသည်။ စာရွက်ခေါင်းစဉ်က “ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ရွေးပွဲဝင်ပြိုင်မည့် ကျောင်းသား/သူများစာရင်း” ဖြစ်ပြီး ၎င်းစာရင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင် ကြည်သာရီအမည်ကြီးကိုတွေ့ရသည်။ သူတို့သဘောပေါက် လိုက်ကြလေပြီ။
“ဟဲ့.. ကြည်သာရီကက အခုလာမယ့် ရွေးပွဲမှာဝင်ပြီး အရွေးခံမှာ.. အခုငါတို့ကျောင်း အခုနှစ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ရွေးပွဲက နင်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူအားလုံး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူကို ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဖြစ်အောင်လို့ မဲပေး ရွေးချယ်ရမှာ။ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းနဲ့ညီတဲ့လူဆို ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ရွေးပွဲဝင်လို့ရတာလေ..။ အဲဒီတော့ အဲဒီ ကြည်သာရီဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက ငါတို့ရဲ့ အသည်းကြားက မဲတစ်ပြား ကိုလိုချင်လို့ သူက ဗျူဟာတွေခင်းသွားတာကိုး…။”
ထိုအခါကျမှ ၀င်းမောင်တို့နားလည်သဘောပေါက်သွားသည်။ သြော်..မကြည်သာရီ သူလည်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ပိုးဝင်သွားပြီကိုး။ .. ။
ဟုတ်ပါသည်။ ကောင်းထိုက်တို့ကျောင်း၏ ဒီနှစ်အတွက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ရွေးပွဲကြီးသည် ယခင်နှစ်များနှင့်မတူဘဲ ကျောင်းသား/သူအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုမည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်တည်းကိုသာရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်သည် ကျောင်းသားများ၏ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ EC(Executive Committee)ကို ပါ စီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်ရာ မည်သည့်ကျောင်းသားက မည်သို့သောဗျူဟာအခင်းအကျင်းမျိုးဖြင့် ထို ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ရွေးပွဲကိုဝင်ပြိုင်မည်လဲ၊ မည်သူကအနိုင်ရမည်လဲဆိုသည်မှာ တစ်ကျောင်း လုံးက စိတ်ဝင်စားနေကြသော ကိစ္စဖြစ်သည်။ အခုတော့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ရွေးပွဲတွင် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် အမတ်လောင်းများစာရင်း… အဲလေ..ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လောင်းများ စာရင်း ပင် ထွက်ရှိနေပေပြီ။
ကြည်သာရီကြောင့် အခိုက်အတန့်အားဖြင့် တိတ်ဆိတ်သွားသော ကောင်းထိုက်တို့၏ စကား ၀ိုင်းသည် ယခုတော့ ပြန်လည်ဆူညံလာပေပြီ။ နီလာက.. ”ဟဲ့..ကောင်းထိုက်၊ နင်ကအဲဒီ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ရွေးပွဲဝင်မယ့်သူစာရင်းကို ဘယ်တုန်းကရထားတာလဲ. ငါတို့တောင် မသိရသေးဘူး” ဟုမေးသည်။
“အေး..အဲဒါ၊ နင်တို့တွေအားလုံး ဒီနေ့အစောဆုံးအတန်းချိန်ကို လစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ သိသာ နေတယ်။ ဒီနေ့မနက်က Eco အချိန်မှာ အတန်းထဲက ဆရာမခုံမှာ အတန်းသားအားလုံးကို တစ် ယောက်တစ်ရွက်လာယူဆိုပြီးတော့ စာရွက်တွေပုံချထားတာ၊ အခုတစ်ကျောင်းလုံးသိပြီးပြီ။ နင်တို့ပဲ မသိသေးတာ”ဟုပြောတော့ မနက်က အတန်းလစ်ခဲ့သည့်သူငယ်ချင်းများအားလုံး ခပ်တည်တည်နှင့် နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်ကြသည်။ သို့သော် သူတို့၏အကြည့်များကတော့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ရွေးပွဲဝင်မည့်သူများစာရင်း စာရွက်ကိုသာ ထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ပြီး ကိုယ်စီစဉ်းစားခန်းဝင်နေကြသည်။
“အင်း..၀င်ပြိုင်မယ့်လူစာရင်းကတော့ ၁၀ ယောက်တောင်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ နာ မည်ကြီး ၃ ယောက်က အဓိကပြိုင်ရမယ်ထင်တယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ အိမ်ဖြည့်အဆင့်”
နီလာက “နင့်အမြင်ပြောစမ်းပါဦး”ဟု ၀င်ထောက်သည်။ ထိုအခါ ကျော်အောင်က…
“ဒီမှာလေဟာ… ဒီအုပ်စုထဲမှာ ငါတို့ကျောင်းက နာမည်ကြီး(၃)ယောက်.. ကြည်သာရီ၊ မြဆောင်နဲ့ မျိုးမင်း… အဲဒီ(၃)ယောက်ကို ကြီး(၃)ကြီးအဆင့်သတ်မှတ်လိုက်မယ်..ကျန်တာတွေက အိမ်ဖြည့်..ဒါပေမယ့်…အဲ..”
ကျော်အောင်က.. “ဒီမှာကျော်ဦးနာမည်ပါနေတယ်၊ အဲဒီကောင်ကိုသတိထားရမယ်၊ ဒီကောင့်ကြောင့် ပွဲဆူနိုင်တယ်”ဟုဆိုရာ သူငယ်ချင်းများက ထောက်ခံသည့်အမူအရာဖြင့် ခေါင်းညိတ်ပြကြသည်။
“ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီကျော်ဦးက လူမိုက် ၊ ဒီကောင့်သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ကျောင်းထဲက ရော၊ ကျောင်းပြင်မှာပါ အများကြီး၊ အကုန်လုံးက မိုက်တိမိုက်ကန်းပုံစံတွေချည့်ပဲ..”ဟု ကောင်းထိုက်က ၀င်ပြောသည်။
၀င်းမောင်က.. “အေး..အဲဒီတော့လည်း မင်းပြောသလို ပွဲဆူတော့ကြည့်ကောင်းတာပေါ့ကွာ..” ဟုပြောလိုက်သော်လည်း သူ့မျက်နှာက တစ်ခုခုကို စိုးရိမ်နေသည့်ပုံ…
၀င်းမောင်စိုးရိမ်မည်ဆိုလည်းစိုးရိမ်စရာ၊ ကျော်ဦး၏ အဓိကပြိုင်ဘက်များထဲတွင် သူတို့နှင့် ရင်းနှီးသောသူငယ်ချင်း မျိုးမင်း လည်းပါနေသည်ကိုး..။
ဆိုတော့ “မျိုးမင်း”ဆိုသူအကြောင်းက သူတို့သူငယ်ချင်းများက အတွင်းသိ၊ အစင်းသိ၊ အူ ဘယ်နှစ်ခွေရှိသည်ကအစသိကြသည်။ မျိုးမင်းက စာတော်သည်။ ဆက်ဆံရေးကောင်း၊ အပြော ကောင်း၊ သူ့ကိုတစ်ကျောင်းလုံးကချစ်ကြသည်။ သူက စာတော်သောကျောင်းသားဖြစ်ပြီး အိုက်တင် လည်းလုပ်တတ်သည်။ Library ထဲက အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသော ကျောင်းသင်ခန်းစာနှင့်သိပ်မပတ် သက်ပေမယ့် လူကြိုက်များတတ်သည့်နိုင်ငံရေး၊ အားကစား၊ အချစ်ကဗျာ၊ ခံစားချက်၊ အလွမ်းအဆွေး၊ အောင်မြင်ရေး စသည့်စာအုပ်တွေကို လက်ထဲမှာကိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ လက်ဖက်ရည် ၀ိုင်းများကိုလှည့်ထိုင်ကာ ထိုစာအုပ်များထဲရှိအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသည်များကို ဘာသာပြန်ရှင်းပြ တတ်သည်၊ သူ့ဘာသာပြန်လက်ရာ ဆောင်းပါးများကလည်း on-line တွင်ရော၊ printed စာစောင် များတွင်ပါ ပါလေ့ရှိသည်။ လူကလည်းအာဘောင်အာရင်းကသန်သန်နှင့် စကားပြောကောင်းသည်။ ကျောင်းသူချောလေးများက သူ့ဆီမှာ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ကျောင်းစာများသွားမေးလျှင်တော့ မျိုးမင်း တို့ ပါးစပ်ကြီးက နားရွက်တက်ချိတ်မလားမှတ်ရလောက်အောင်ကို ပြုံးဖြီးဖြီးနှင့် စာမေးသူပင် အားနာရလောက်အောင် ခရေစေ့တွင်းကျ ရှင်းပြတတ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်က နည်းနည်း ကြောက်တတ်သည်။ တစ်ခါတုန်းက သူကင်တင်းမှာထိုင်နေစဉ် စာလာမေးသောကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို စာအကြောင်းသာမက နိုင်ငံခြားမင်းသမီးများ၏ အလှပြုပြင်ပုံများနှင့် အလှပြင်ပစ္စည်းများအကြောင်းကို ထိုင်ပြောရာ အချိန်အတန်ကြာသည်အထိ စကားကမပြတ်။ ထိုကျောင်းသူလေးကလည်း မျက်စိလေးကလယ်ကလယ်နှင့် မျိုးမင်းပြောသည်ကိုနားထောင်ပြီး မျိုးမင်းကို အထင်ကြီးအားကျသည့် အကြည့်ဖြင့်စိုက်ကြည့်နေရာ ကြာလာတော့ ထိုကျောင်းသူလေး ကို ကြိတ်ခိုက်နေသည့် ဘေးဝိုင်းမှကျောင်းသားများက ထိုမြင်ကွင်းကို မုဒိတာမပွားနိုင်တော့ မျိုးမင်းကို “စာနဲ့ပတ်သက်တာပဲပြော၊ တခြားအကြောင်းမပြောနှင့်” ဟု အသားလွတ်ဟောက်ပြီးရန်ရှာရာ မျိုးမင်းမှာ ကြောက်လန့်တကြား ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေချိန် ကောင်းထိုက်တို့ အရောက်မြန်သဖြင့်သာတော်တော့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကောင်းထိုက်တို့၏ ကောလိပ်တွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ရွေးပွဲကြီးနှင့်ပတ်သက်သည့်အခြေအနေသည် ဇာတ်ရှိန်မြင့်လာသလို အဖျက်အမှောင့်များ၊ ကျားကွက်ရွှေ့မှု များ၊ အားပြိုင်မှုများလည်းပေါ်ပေါက်လာပါတော့သည်။
အခုလည်း ကောင်းထိုက်၊ ၀င်းမောင်နှင့် ကျော်အောင်တို့ သုံးဦး အတန်းချိန်ပြီးလို့ ကင်တင်းန် လစ်ရန် လွယ်အိတ်ပြင်နေခိုက် အခန်းဝတွင် နီလာ ရောက်လာသည်။ ကောင်းထိုက်က “ဟာ..နီလာ၊ အတော်ပဲ၊ ငါတို့လည်းအခုပဲ ကင်တင်းန်လစ်တော့မလို့၊ နင်တစ်ခုခုလိုက်စားပါလား”ဟု ဖိတ်ခေါ် လိုက်သည်။ နီလာကလည်း.. “အေး..ငါလည်း နင်တို့ကိုပြောစရာရှိလို့ လာခေါ်တာ၊ သွားကြမယ်” ဟုဆိုကာ သူငယ်ချင်း လေးယောက်သား ကင်တင်းန်သို့ချီတက်ခဲ့ကြသည်။ ကင်တင်းန်တွင်နီလာက “..ဟဲ့..ငါအခုသတင်းအသစ်တစ်ခုကြားတယ်၊ ငါတို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ပွဲမတိုင်ခင် ငါတို့ကျောင်းသားတွေ Gathering အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ကြမယ်တဲ့။ အဲဒီပွဲကျရင် Fresher welcome (မောင်မယ်သစ်လွင်)ကြိုဆိုပွဲရော၊ ငါတို့ကောလိပ်ရဲ့ King နဲ့ Queen ရွေးပွဲရော ပေါင်းလုပ်မှာတဲ့။ အခု အဲဒီအခမ်းအနားမှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လောင်းတွေကလည်း လှုပ်ရှားကြမှာသိလား”ဟု ပြောရာ… ကောင်းထိုက်တို့ကလည်း စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် “ဟာ..ဟုတ်လား၊ ဘာတွေလှုပ်ရှား ကြမှာလည်း”ဟုမေးရာ… “အေး..ငါအခုပဲ ငါ့ကို ကြည်သာရီနဲ့တွဲနေတဲ့ Computer Programming က ဧပရယ်လ်တို့လာပြောသွားတာ… အောင်မယ်လေး ငါတို့သာမသိကြတာဟေ့.. သူတို့တွေကြိတ်ကြံနေကြတာကအများကြီး..အဲဒီပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်နှစ်ခုကတော့ ငါတို့ကျောင်း ကလူအားလုံးစိတ်အ၀င်စားဆုံးပဲဟေ့..ဘာတွေလဲဆိုတော့ တစ်ကျောင်းလုံးရဲ့ King နဲ့ Queen ရွေး ချယ်ပွဲ၊ နောက်တစ်ခုကတော့.အဲဒီပွဲကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကတော့ ငါတို့ကျောင်းက စာတော်တဲ့ကျောင်းသားတွေကို scholarship ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေ..အေး..အဲဒီအစီအစဉ်ကို ဟို…သူဌေးသားမြဆောင်ရဲ့အဖေကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူပြီး sponsor ပေးမယ်တဲ့..ဆိုလိုတာက စာတော်တဲ့ကျောင်းသားတွေကို scholarship ပေးမယ့် ကုန်ကျစရိတ်ကို သူတို့ကုမ္ပဏီကပေးမှာတဲ့.။ အဲဒါ ကျောင်းအုပ်ကြီးကသဘောတူလိုက်ပြီတဲ့..ဟဲ့။”
“ဟာ…အဲဒါအရင်တုန်းက ကျောင်းက ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့က စီစဉ်တာလေ”ဟု ကောင်းထိုက်က အထွန့်တက်သည်။
နီလာက..”အေး..ဟုတ်တယ်လေ၊ အခုလည်း ဘယ်ကျောင်းသားကို Scholarship ပေးရမလဲ ဆိုတာကို ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကပဲရွေးမှာ..ဒါပေမယ့် အဲဒါကို မြဆောင်တို့အဖေက အဲဒီ scholarship ပေးမယ့် ကျောင်းသားတွေကို ပညာသင်စရိတ် ဆုချီးမြှင့်ရင် အရင်ကထက်ငွေပိုများမယ်၊ ငွေပိုပေးမယ်ပေါ့ဟာ၊ နယ်ကကျောင်းသားဆိုရင်လည်း အဆောင်ပါ စားရိတ်ငြိမ်းစီစဉ်ပေးမှာတဲ့၊ စာအလကားသင်ပေးရုံတင် မဟုတ်တော့ဘူး ၊ နေထိုင်စားသောက်ဖို့အတွက် accommodations ပေးတဲ့အပြင် stipend လစဉ် ထောက်ပံ့ကြေးပါထပ်ပေးဦးမှာတဲ့။ အဲဒီ Scholarship ရတဲ့ကျောင်းသားတွေအဖို့ကတော့ ကျောင်းစာကလွဲလို့ ကျန်တာဘာမှလုပ်ဖို့မလိုအပ်တော့ဘူး၊ အဲဒီကျောင်းသားသာ ခြိုးခြံချွေတာတတ်ရင် သူ့အိမ်က ပိုက်ဆံယူစရာမလိုတဲ့အပြင် သူ့အိမ်ကိုတောင် ပိုက်ဆံပြန်ပို့ပေးနိုင်အောင် သူတို့ကပေးမှာတဲ့.. ပြီးတော့ Scholarship ပေးမယ့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားအရေအတွက်ကိုလည်း အရင်က (၅)ဦးပေးနေရာက အခု (၁၀)ဦးအထိ တိုးမြှင့် လိုက်ပြီတဲ့”ဟု နီလာကရှည်လျားစွာရှင်းပြပြီးနောက် “နင်တို့ကိုရှင်းပြရတာ ငါမောလိုက်တာ” ဟုဆိုကာ အအေးတစ်ခွက်မှာသောက်နေသည်။
ကျော်အောင်က ထုံးစံအတိုင်း တွေးဆစွာဖြင့်ပင် “အင်း..အရင်ကတော့ မြဆောင်တို့အဖေ ကုမ္ပဏီက ငါတို့ကျောင်းကို လစဉ်ကြေးလောက်ပဲထည့်တာ၊ အခုမှ သူ့သားက ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်အဖြစ် အရွေးခံမယ်ဆိုတာနဲ့ပဲ အခုလို အလှူကြီးကို ရက်ရောတော့တာလားလို့ တွေးစရာပဲ၊ အေးလေ..သူများအလှူကို ငါတို့ကဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး..ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သမားရိုးကျ တိုက် ဆိုင်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်”..ဟုဆိုရာ ၀င်းမောင်က..
“ကျော်အောင် .. မင်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းအတွေးလွန်နေပြန်ပြီ၊ ငါ..မင်းပြောသလိုဆို ငါမေး မယ်၊ အခု မြဆောင်အဖေက သူ့သားကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးသုံးတယ် ပဲထားပါတော့… ဒီပိုက်ဆံတွေက သူ အမြတ်ပြန်ရမယ့်ပိုက်ဆံတွေမှမဟုတ်တာ”..
ထိုအခါကျော်အောင်က “အဲဒါတော့ငါလည်းသိပ်မသိဘူးကွာ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စက ဟို ကောင်မျိုးမင်းကိုတော့ ငါတို့အသိပေးသင့်တယ်ထင်တယ်”ဟုပြောလိုက်လေသည်။ ထို့နောက် နီလာ ဘက်သို့လှည့်၍ “ဟဲ့..နီလာ၊ နင်ဒီအကြောင်းတွေကို မျိုးမင်းကိုပြောပြီးပြီလား” ဟုမေးရာ နီလာက အအေးသောက်ရင်းမှ ခေါင်းခါပြသည်။ ထိုအခါ ကျော်အောင်က
“ကဲ..ကောင်းထိုက် ၊ ငါတို့သောက်စရာရှိတာသောက်ပြီး မျိုးမင်းကိုသွားရှာရအောင်၊ ဒီကောင် ဒီအချိန်ဆို library မှာရှိမယ်ထင်တယ်..” ဟုပြောရာ ကောင်းထိုက်တို့ကလည်း “ကောင်းပြီလေ”ဟု ဆိုကာ သဘောတူလိုက်သဖြင့် သူတို့အုပ်စုသည် အအေးဖိုးကျသင့်ငွေကိုရှင်းပြီး ကင်တင်းန်မှ ထွက်ခဲ့ကြသည်။
Library ရောက်တော့ မျိုးမင်းက သူတို့လာသည်ကိုမြင်သဖြင့် သူဖတ်နေသော အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ထူကြီး၏ မျက်နှာဖုံးကို သူတို့မြင်အောင် မသိမသာထောင်ကာ ကိုင်လိုက်သည်ကို မျက်စိလျှင်သော ကောင်းထိုက်က မြင်လိုက်သည်။ အကြွားသန်သောသူငယ်ချင်းကို နည်းနည်း ဒေါသ ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်သွားသဖြင့် ”ဟေ့ကောင်မျိုးမင်း..ငါတို့မင်းကို သတင်းတစ်ခုပြောစရာရှိလို့လာတာ.. အဲဒါမင်းတို့ leader ရွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်တယ်၊ အဲဒါမင်းနားထောင်မှာလား၊ မင်းငါတို့ဝင်လာမှ မင်းဖတ် နေတဲ့စာအုပ်ကြီးကို ထောင်ပြပြီးငါတို့မြင်အောင်လုပ်ပြပြီး ပဲဆက်များနေရင်တော့ ငါတို့ အတန်းသွား တက်တော့မယ်” ဟုပြောလိုက်မှ မျိုးမင်းက မျက်ကလဲဆန်ပြာဖြင့်..
‘သူငယ်ချင်း..မင်းကလည်းကွာ၊ မင်းတို့ဝင်လာတာငါမသိပါဘူးကွ၊ တိုက်ဆိုင်သွားတာဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်” ဟုဆိုကာ သူဖတ်နေသောစာအုပ်အထူကြီးကို စာကြည့်တိုက်မှူးထံပြန်အပ်ခဲ့ပြီး library အပြင်ဘက်အုတ်ခုံလေးတွင် ထိုင်စကားပြောလေသည်။ ကောင်းထိုက်တို့က သူတို့ကြားထားသော သတင်းကို မျိုးမင်းအားရှင်းပြပြီးချိန်တွင် ၀င်းမောင်တို့က စောစောကသူတို့မကြေလည်သော ကိစ္စကို မျိုးမင်းကိုထပ်ပြောပြသည်။
“ဟေ့ကောင်..မျိုးမင်း..မင်းပြောစမ်းကွာ..ဒီမြဆောင်အဖေက ဒီလိုပိုက်ဆံတွေအများကြီးသုံး တာ သွေးရိုးသားရိုးမှဟုတ်ရဲ့လား… သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ရင် သူဒီပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်ကပြန်ရမလဲ” ဟုမေးရာ မျိုးမင်းက…
“ဟာ..၀င်းမောင်၊ မင်းကလည်း… အခုလက်ငင်းကြီးတော့ ပိုက်ဆံ ဘယ်ပြန်ရမလဲကွ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကတော့ .. သူ့သားကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရင် သူလည်း သိက္ခာရှိမယ်၊ ပြီးတော့ ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ ခင်မင်မှုရမယ်. ပြီးတော့ မြဆောင်အဖေက နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေ “ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့”ယူဖို့ လျှောက်ထားတာ ငါတို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ထောက်ခံပေးရင် ရဖို့လွယ်တယ်လို့လည်း ပြောသံကြားတယ်။ နောက်ပြီး မင်းစဉ်းစား ကြည့်လေ။ အခု ငါတို့ကျောင်းက အများပိုင်ဆိုပေမယ့် ငါတို့ကျောင်းရဲ့ စတော့ရှယ်ယာတွေက ရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းလေးပဲ ရောင်းသေးတာ။ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ငါတို့ကျောင်းကို ထပ်ပြီး တိုးချဲ့ဖို့ ငွေအများကြီးလိုတယ်။ အဲဒီတော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒီစတော့ရှယ်ယာတွေကို ထုတ်ရောင်းမှာပဲ။ အဲဒီအခါကျရင် ငါတို့ကျောင်းရဲ့ စတော့ရှယ်ယာအများဆုံးကို မြဆောင် အဖေကလိုချင်နေတာ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးကမရောင်းသေးလို့၊ ငါတို့ကျောင်းက ကျောင်းသားလည်းများတယ်၊ နိုင်ငံတကာလည်းပေါက်တယ်၊ အဲဒီတော့ ငါတို့ကျောင်းရဲ့စတော့ရှယ်ယာ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးကို မြဆောင်အဖေသာပိုင်သွားရင် ပွဲသိမ်းပြီလေကွာ.. ပိုက်ဆံအကျိုးအမြတ်လည်းရ၊ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတစ်ခုထပ်ပွင့်၊ ပြီးတော့ သူ့ကုမ္ပဏီရဲ့ အကြံပေးပညာရှင်တွေကိုလည်း ငါတို့ ကျောင်းက စာတော်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပဲပြန်ခန့်မှာဆိုတော့ ပြင်ပ ပညာရှင်တွေကိုဈေးကြီးပေးငှားစရာ မလိုတော့ဘူးလေ။ အဲဒါ ဘော့စ်တော်တော်များများက ငါတို့ကျောင်းအုပ်ကြီးကို လာညှိနေကြတာ ကြာပြီကွ၊ ငါတို့ကျောင်းအုပ်ကြီးက စဉ်းစားမယ်ပဲပြောထားတာ.. ဘယ်သူ့ကိုမှ စကားမကျွံသေးဘူး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ Investment for Long-term Business Plan “ရေရှည်မှာ အကျိုးအမြတ်ရလာနိုင်မယ့် စီးပွားရေးစီမံကိန်းများတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု” လို့ခေါ်တာပေါ့။ ငါထင် တာတော့ ဧကန္တ မြဆောင်တို့သားအဖ ဒီကျောင်းကို သိမ်းဖို့ ကြံနေပြီလားမသိဘူး..” ဟု မျိုးမင်းက အကွက်ကျကျရှင်းပြလိုက်လေရာ ၀င်းမောင်တို့မှာ ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားသည်။ ထိုအခါနီလာက “ကဲ..မျိုးမင်း သူများတွေကတော့ ခြေလှမ်းတွေ စကျဲနေပြီ၊ နင်ဘာလုပ်မှာလည်း” ဟုမေးရာ.. မျိုးမင်းက စပ်ဖြဲဖြဲဖြင့် “ငါကတော့ ဟိုတလောကဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံရေးပညာရှင်ကြီး တစ်ဦးပြောသလို သမ္မတမဖြစ်ချင်ဘူး၊ သမ္မတကိုအကြံပေးတဲ့ သမ္မတအကြံပေးပဲလုပ်ချင်နေတယ်”ဟု စပ်ဖြဲဖြဲနှင့်ဖြေရာ နီလာက… “အေး..နင့်လိုကောင်မျိုးကတော့ သမ္မတအကြံပေးဖြစ်ဖို့နေနေသာသာ သမ္မတ အိမ်တော် သန့်ရှင်းရေးအဆင့်ရရင်တောင်ကံကောင်း” ဟုနှုတ်ခမ်းစူကာ ချော်တောငေါ့လိုက်သဖြင့် အားလုံးပွဲကျသွားကြသည်။ ထိုအခါကျမှ မျိုးမင်းက.. “ငါလည်း ပြောသာပြောနေရတာဟာ၊ ဒီကောင်မြဆောင်တို့သားအဖလုပ်ပုံနဲ့ ခေါင်းတောင်နည်းနည်းခြောက်နေပြီ” ဟု စိတ်ပျက် သံကြီးဖြင့်ပြောရာ ကောင်းထိုက်တို့က ”သူငယ်ချင်း၊ မင်းကလည်း စစ်မရောက်ခင် မြှားမကုန်ချင်စမ်းပါနဲ့”ဟုဆိုကာ အားပေးနှစ်ရလေတော့သည်။ ၀င်းမောင်ကလည်း “မျိုးမင်း..ငါတို့က မင်းရဲ့ကောင်းတူဆိုးဖက် သူငယ်ချင်း အရင်းတွေကွာ..ငါတို့လုပ်ပေးနိုင်တာရှိရင်လည်းပြောကွာ…”ဟု ဆိုရာ မျိုးမင်းက ”အေး..ငါက Tea Party လေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်၊ ဟိုကောင် မြဆောင်တို့လို အကြီး အကျယ်ကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ၊ ငါတို့ ကျောင်းသားတွေနားချိန်ကျရင် ငါကကျောင်းသားတွေကို Tea Party လေးပေး၊ လက်ဖက်ရည်တိုက်ပြီး စကားနည်းနည်းပြောချင်တယ်” ဟုဆိုရာ ကောင်းထိုက် က “အေး..လုပ်လေ၊ ငါတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲ”ဟုမေးရာ မျိုးမင်းက ”ဟို..ငါ အဲဒီ Tea Party အတွက် ပိုက်ဆံနည်းနည်းလိုနေတယ်ကွာ၊ ငါ့မိဘတွေကလည်း ငါ့ကျောင်းစရိတ်နဲ့တင်တော်တော်ထောင်းနေ ပြီဆိုတော့ ငါသူတို့ဆီကလည်း မတောင်းချင်တော့ဘူး”ဟု ပြောသည်။
ထိုအခါ နီလာက မိန်းကလေးပေမယ့် ဒီလိုနေရာမျိုးမှာပြတ်သားသည်။ နီလာ၏လက်များ သည် သူမ၏လည်ဂုတ်ပေါ်သို့ဝဲသွားပြီး ပြန်ကျလာသည့်အခါ ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုံးပါလာသည်။ “ကဲ. ရော့မျိုးမင်း..နင်ဒါကို ပေါင်ချင်လည်းပေါင်၊ ရောင်းချင်လည်းရောင်းလိုက်၊ ပြဿနာမရှိဘူး၊ အဲဒါ ငါ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အချိန်ပိုင်းစာရင်းစစ်လုပ်နေတုန်းက ငွေစုပြီးဝယ်ထားတာ” ဟုပြောကာ မျိုးမင်းကို ပေးလိုက်လေသည်။ ထိုအခါ ကောင်းထိုက်လည်းမနေသာတော့.. သူ့ ရွှေလက်စွပ်ကိုချွတ်ပြီး မျိုးမင်း ကိုပေးလိုက်သည်။ “မျိုးမင်း..ငါတို့ကမင်းကို ဘော်ဒါအကန့်နဲ့ကူညီတာ၊ မင်းကြိုးစားကွာ၊ မင်းပညာတော်တာငါသိတယ်၊ မင်းအောင်မြင်မှာပါ၊ တကယ်လို့ မင်းထင်သလိုဖြစ်မလာလည်း ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါတို့ကို မင်းဘာမှပြန်ဆပ်စရာမလိုပါဘူး”ဟုပြောရာ နီလာကလည်း “အေး.. ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ကနင့်ကို ငွေချေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူး၊ နင့် ခေါင်းထဲမှာ ငါတို့ကို နင့်ရဲ့ အကြွေးရှင်တွေလို့သဘောမထားနဲ့၊ အတိုးလည်းပေးစရာမလိုဘူး၊ နင်လုပ်စရာရှိတာကိုသာ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့လုပ်၊ အဲဒီလို နင့်စိတ်က ပေါ့ပါးနေမှလည်း နင်အောင်မြင်မှာ”ဟု ထပ်ဆင့်ပြောလိုက်ရာ တစ်သက်လုံးက သူများထက်စာတော်ချင်၊ သူများကိုဆရာလုပ်ချင်၊ ကြောချင်သော မျိုးမင်းမှာ သူအထင်ကြီးလောက်အောင်စာတော်သည့် သူငယ်ချင်းများစာရင်းတွင် မပါသော်လည်း ဖြူစင်သောစေတနာဖြင့် သူ့ကို ခင်မင်ကြသည့်သူငယ်ချင်းများ၏မေတ္တာတရားကို သူတစ်ခါမှမတွေ့ကြုံဘူးသည့်အလား ရုတ်တရက် တောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်သွားပြီး မျက်ရည်များပင်ဝဲလာကာ ”ငါမင်းတို့ကို သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ရယ်၊ မင်းတို့အပေါ်မှာ ငါမောက်မာမိတာရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါ”ဟုဆိုကာ သူ၏သူငယ်ချင်းများအား ပြေးဖက်လိုက်လေတော့သည်။ (စာကြွင်း-သူပြေးဖက်သောသူငယ်ချင်းများထဲတွင်တော့ နီလာ မပါ ပါ)။ ထို့နောက် ၀င်းမောင်နှင့် ကျော်အောင်တို့မှလည်း သူတို့လုပ်အားကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတိုို့နိုင်တာ သူတို့ကူညီမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကာ သူငယ်ချင်းများ Happy Ending ဖြင့် လမ်းခွဲခါနီးတွင် မျိုးမင်းက ”ငါ ဒီရွှေတွေကို ဘယ်မှာသွားပေါင်ရမလဲ၊ ငါမင်းတို့ရွှေတွေကို မရောင်းချင်ပါဘူး၊ တစ်လ လောက်ပဲပေါင်ပြီး လကုန်လို့ ငါ guide လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေဆီက ကျူရှင်ခရရင် ပြန်ရွေးပေးပါ့ မယ်၊ အခု ငါဘယ်မှာပေါင်ရမှန်းမသိလို့” ဟုပြောရာ ကောင်းထိုက်ကပင် .. ”ကဲ..ဒါဆိုလည်း ငါ့ အသိ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက် ငါတို့ကျောင်းနားက ရပ်ကွက်ထဲမှာနေတယ်။ ငါနဲ့ တော်တော်ခင်တယ်။ ပြီးတော့ သူက စိတ်လည်းစိတ်ချယုံကြည်ရတယ်။ ငါတို့ပစ္စည်းတွေ သူ့ဆီမှာ အာမခံအနေနဲ့ ခဏထားပြီး ငွေချေးကြည့်ရအောင်၊ သူက အတိုးယူမှာမဟုတ်ပါဘူး”ဟု ဆိုသဖြင့် ကောင်းထိုက်၏ အသိ ဦးလေးကြီးအိမ်သို့သွားရာ ထိုနေ့မှာ သောကြာနေ့ နေ့လည်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ကောင်းထိုက် အသိဦးလေးကြီှးမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သဖြင့် သောကြာနေ့ဗလီတက်နေသောကြောင့် ထိုအိမ်နားကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်ခဏထိုင်နေကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် သူတို့ထိုင်နေသည့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အရှေ့မှ လူမိုက်ပုံစံဖြင့် လူ ၃ ယောက်နှင့်အတူ သူတို့ ကျောင်းမှ ကျော်ဦးတို့ဖြတ်သွားသည်ကို အမှတ်မထင် မြင်လိုက်ရသည်။ ထိုအခါကောင်းထိုက်က “ဟာ..ဟိုမှာ ကျော်ဦး..ကျော်ဦး၊ ငါတို့ကိုမြင်ပုံမရဘူး” ဟုပြောရာ ကျော်အောင်က.. “သွားမခေါ်နဲ့ ကောင်းထိုက်၊ လွှတ်ပေးထားလိုက်၊ ငါတို့အဖွဲ့ထဲမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါတယ်၊ ဒီကောင့် သူငယ်ချင်းတွေ ပုံစံကြည့်ရတာ သိပ်ဟန်ပုံမရဘူး”ဟုပြောရာ ကောင်းထိုက်က “အေး…ငါလည်း နဂိုကတည်းက ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး”ဟုပြန်ပြောလိုက်လေသည်။ ထို့နောက်လက်ဖက်ရည် ထိုင်သောက်ပြီး ကောင်းထိုက်အသိဦးလေးကြီးအိမ်သို့သွားရာ ထိုဦးလေးကြီးက ဗလီမှအိမ်သို့ ပြန်ရောက်နေပြီး ကောင်းထိုက်ပြောသည့်အတိုင်းပင် ထိုဦးလေးကြီးက … “အေး..အန်ကယ်က မောင်ကောင်းထိုက်ရဲ့ မိဘများနဲ့လည်း ရင်းနှီးပါတယ်၊ မောင်ကောင်းထိုက်ပစ္စည်းတွေလည်း ထားခဲ့စရာမလိုပါဘူး၊ မောင်ကောင်းထိုက်လာယူတဲ့ငွေကလည်း သိပ်အများကြီးမှမဟုတ်တာ၊ အတိုးတော့ အန်ကယ် လုံးဝမယူပါရစေနဲ့ကွယ်”ဟုဆိုကာ အတိုးယူဖို့ အကြောက်အကန် ငြင်းလေတော့သည်။ သို့သော်လည်း ကောင်းထိုက်တို့က အတိုးမယူသည့်တိုင် အာမခံ ပစ္စည်းလက်ခံထားရန် အတင်းအကျပ်ပြောတော့ “အဲဒါဆိုလည်း မောင်ကောင်းထိုက် ကြိုက်တဲ့ အချိန်လာယူပါ၊ အန်ကယ်သေချာသိမ်းထားပါ့မယ်၊ မောင်ကောင်းထိုက်တို့ ပစ္စည်းတွေ မှဲ့တစ် ပေါက်မစွန်းစေရပါဘူး”ဟု ပြန်ပြောပြီး ပစ္စည်းများကိုလက်ခံထားကာ ကောင်းထိုက်တို့လိုသော ငွေကိုထုတ်ပေးလိုက်လေတော့သည်။
လမ်းတွင် နီလာက “ဟဲ့.ကောင်းထိုက်၊ အဲဒီအန်ကယ်ကြီးက ငွေအတိုးယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ နင်ဘယ်လိုကြိုသိလဲ…”ဟုမေးရာ ကောင်းထိုက်က ”ဟ..နင်ကလည်း၊ သူတို့က မွတ်စလင်မ်တွေလေ၊ သူတို့မွတ်စလင်မ်တွေက ၀က်သားတင်မစားတာမဟုတ်ဘူး၊ အတိုးလည်းမစားဘူး”ဟု ပြန်ပြောလေ သည်။ ထိုအခါ မျိုးမင်းက “..ဟ … ကောင်းထိုက်၊ မင်းတော်တော်လည်တဲ့ကောင်ပဲ၊ အကြံပိုင်တယ် ကွာ”ဟု ချီးကျူးရာ ပွဲကျသွားကြသည်။ ထိုအခါ ကောင်းထိုက်က ”တိုက်ဆိုင်သွားတာပါကွာ၊ မင်းပြောတဲ့ပုံက မသိရင်ငါကပဲ ဂွင် ရိုက်သလိုကြီးဖြစ်နေတယ်၊ ကဲ..အခု ငါတို့လည်း မင်းကို ငါတို့ပစ္စည်းတွေပေးပြီးကူညီတာ အတိုးတင်မဟုတ်ဘူး၊ အရင်းပါပြန်မပေးလည်းဖြစ်တယ်လို့ မင်းကိုပြောပြီးသား၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုပေါ့ကွာ”ဟု ပြန်ပက်လိုက်ရာ မျိုးမင်းလည်း ပါးစပ်ပိတ်သွားတော့ သည်။
ကျော်အောင်က..”ဟိုကောင် ကျော်ဦးကို ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာတွေ့တာငါတော့ သိပ်မသင်္ကာဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင် ဒီရပ်ကွက်ထဲလာတာလည်းမသိဘူး”ဟုပြောရာ..နီလာက “အေး.. အဲဒီကျော်ဦး လည်း ဘာလုပ်နေလည်းမသိဘူး၊ သူက မျိုးမင်းလိုလည်း စာမတော်၊ မြဆောင်လိုလည်း ပိုက်ဆံမရှိ၊ ကြည်သာရီလိုလည်း ဘာအရှိန်အ၀ါမှမရှိတော့ သူဘာလုပ်မလည်းမသိဘူး” ဟု ဆိုကာ ကျော်ဦးကိစ္စမှာ သူတို့အတွက် ပဟေဠိတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့လေတော့သည်။
တနင်္လာနေ့ ကျောင်းရောက်သောအခါ ကောင်းထိုက်တို့ကို သတင်းတစ်ပုဒ်က ဆီးကြိုနေလေ သည်။ ထိုသတင်းက အခြားတော့မဟုတ်။ ကျော်ဦးနှင့် ၎င်း၏အပေါင်းအပါများသည် ကျောင်းနားရှိ ရပ်ကွက်ထဲက လူမိုက်များနှင့် ရန်ဖြစ်ကြသည်ဆိုသည့် သတင်း။ ကျော်ဦးလိုလူမျိုး ရန်ဖြစ်တာ အထူးအဆန်းမဟုတ်ပေမယ့် အခုတစ်ခါက ထူးဆန်းနေသည်။ ကျော်ဦးရန်ဖြစ်သည့်အကြောင်းကို ကျောင်းမှလူတော်တော်များများက ချီးကျူးနေကြသည်။ ဆရာ/ဆရာမများကလည်း ဆူပူကြိမ်းမောင်းနေတာမျိုးမလုပ်ဘဲ ကျော်ဦးတို့အုပ်စုကို ခပ်ဆိုးဆိုး ခပ်ပေပေ ကျောင်းသားများမို့ ခပ်တင်းတင်းခပ်တည်တည်ဖြင့်ဆက်ဆံသောဆရာ/ဆရာမများကပင် “သားတို့” ဟုခေါ်နေတာ ကြားရသည်။ မိန်းကလေးများကလည်း ကျော်ဦးကိုတွေ့လျှင် သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ကို အားကိုးသည့်အကြည့်မျိုးဖြင့်ကြည့်ကြသည်။ ကျော်ဦးတို့အုပ်စုကလည်း ခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာထားများ ဖြင့် ကျောင်းကလူတွေအားလုံးနှင့် အလွမ်းသင့်အောင်ဆက်ဆံနေကြသည်။ ၀င်းမောင်နှင့် ကင်တင်းန် မှာတွေ့တာပင် ”ကိုဝင်းမောင်၊ လက်ဖက်ရည်သောက်ပါဦးလား”ဟု လှမ်းခေါ်သေးသည်ဆို၏။ ကောင်းထိုက်တို့ ခေါင်းစားသွားသည်၊ ဘယ့်နှယ်..ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ နောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း “အင်တာနက်” ဟု ၀င်းမောင်တို့အမည်ပြောင်ပေးထားသည့် နီလာ ပြောမှသိရတာက…
ကောင်းထိုက်တို့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် နယ်မှကျောင်းလာတက်သော ကျောင်းသူလေးများ နေသည့်အဆောင်များရှိသည်။ အဆောင်များဟုဆိုရာတွင်လည်း အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးကဲ့သို့ ကျောင်းအဆောင်များမဟုတ်ဘဲ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရပ်ကွက်များမှ အိမ်ခန်းပိုင်ရှင်များက ၎င်းတို့ အိမ်ခန်းလေးများကို ကျောင်းသူများသို့ပြန်ငှားခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် သောကြာညက စာတမ်းပြုစု နေသည့်ကျောင်းသူလေးနှစ်ဦး သူတို့စာတမ်းကိစ္စအတွက် ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးအိမ်သို့သွားရာ အိမ်ပြန်နောက်ကျသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအခါ ထိုကျောင်းသူလေးများအပြန်လမ်း လူပြတ်သောနေ ရာတွင် ထိုရပ်ကွက်ထဲရှိလူမိုက်များက ကျောင်းသူလေးများကို အိနြေ္ဒပျက်လောက်အောင် နှောင့် ယှက်သည်၊ ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်သည်ဆိုသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျော်ဦးနှင့်သူငယ်ချင်းများက ထို ကျောင်းသူလေးများကို ၀င်ကူညီပြီး ထိုရပ်ကွက်ထဲမှလူမိုက်များကို ထိုးကြိတ်လိုက်ကြရာ ထိုလူမိုက် များ ထွက်ပြေးသွားသည်ဆိုသည်။ ထို့နောက် ညတွင်းချင်းပင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကို အကြောင်းကြားရာ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးမှ ထိုရပ်ကွက်သည် လူမိုက်ပေါသည်၊ အဆောင်နေ ကျောင်းသူလေးများတွက် မလုံခြုံဟုဆိုကာ ထိုကျော်ဦးတို့သူငယ်ချင်းအုပ်စု အကူအညီဖြင့် ညတွင်းချင်းပင် အခြားရပ်ကွက်တစ်ခုတွင် အိမ်ခန်းငှားပြီး အိမ်ပြောင်းပေး လိုက်ကြသည်ဟုသိရသည်။ သြော်..ဒါကြောင့်ကိုး။
အခုနောက်ပိုင်းကာလများတွင်တော့ ကျော်ဦးတို့သူငယ်ချင်းအုပ်စုမှာ ကျောင်းထဲတွင် တော်တော်မျက်နှာပွင့်နေကြသည်။ ဟိုလူကလက်ဖက်ရည်သောက်ခေါ်လိုက်၊ ဒီလူက သွားစရာရှိလုိ့ ခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပေးပါလားဟု အဖော်ညှိလိုက်ဖြင့် အဆင်ပြေနေကြသည်။ ဤတွင် ကျော်ဦးတို့က ထပ်မံ၍ အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကို စ လုပ်သည်။ ပြီးခဲ့သောပြဿနာအတွက် ကျော်ဦးတို့က သက်ဆိုင်ရာသို့အကြောင်းကြားပြီးသွားပြီဟုဆိုသည်။ သူတို့ပြောတာပေါ့လေ။ သက်ဆိုင်ရာကလည်း သူတို့ကို ချီးကျူးသည့်အပြင် သက်ဆိုင်ရာနှင့်ပူးပေါင်း၍ နယ်မြေအေးချမ်းအောင် ဆောင်ရွက် ကြပါဟုလည်း မှာလိုက်သည်ဟုပြောသည်။ ဆိုတော့… ကျော်ဦးက ပိုဂွင်တည့်သွားသည်။ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူမိုက်များက ပြီးခဲ့သောပြဿနာကြောင့် မိမိတို့ကျောင်းကို အမြင်မကြည် တော့ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် မိမိတို့ကျောင်းသူလေးများကို ပို၍ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းသူလေးများအနေဖြင့်လည်း အဖေါ်မပါဘဲ တစ်ယောက်တည်း၊ နှစ်ယောက်တည်း အပြင်သို့ မထွက်သင့်ကြောင်း အစရှိသည်ဖြင့် သူတို့၏အစီအစဉ်တွေကိုချပြသည်။
အပိုင်း – ၁ ပြီး၏။ ။
Tags: short stories, Thantzinaye